नेपालकाे तुलनामा यूएई उत्कृष्ट टिम होइनः पारस | Neplays.com
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले टी-२० सिरिजका लागि नेपाल तयार रहेकाे बताएका छन् । उनले यूएइका खेलाडीहरू राम्राे भए पनि नेपाली टिमकाे तुलनामा उत्कृष्ट नभएकाे बताए । बिहीबारदेखि शुरूहुने टी २०काे अन्तिम अभ्यासका क्रममा पत्रकारसँग गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंशः
एक दिवशीय सिरिज त जित्यौं, टि–२० का लागि तयारी कस्तो छ ?
मैले यसअघि पनि भनेको छु की हामी सँधै तयार रहनुपर्छ । एक दिवशीय सिरिजको जितपछि हामी टि–२० सिरिज खेल्दैछौं । फरक फम्र्याटको क्रिकेट खेल्दैछौं । युएईले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
हामीले उनीहरुभन्दा थोरै राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण जित निकाल्न सम्भव भएको हो । हामीले टि–२० त नियमित खेलिरहेका छौं । पक्कै पनि सहज हुन्छ होला । हामी यो फम्र्याटमा अभ्यस्त छौं । तरपनि यो विर्सिनु हुँदैन की हामी शुरुबाट नै शुरुवात गर्नुपर्नेछ । हामीले घरमा खेल्ने क्रिकेटभन्दा यहाँको कन्डिसन फरक छ । कन्डिसनमा हामी कति अनुकुल हुन सक्छौं र खेलाडी कति भिज्न सक्छन्, त्यसले निर्धारण गर्नेछ । घरमा खेल्नु र अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा पनि केही फरक भने हुनेछ ।
हामीले फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेल्नु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा केही दबाब हुनेछ । त्यसले खेलाडीमा अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि बहन गराउनेछ । हामीले राम्रो तयारी गरेका छौं । टिममा राम्रो आत्मविश्वास छ । आशा गरौं यो आत्मविश्वासलाई प्रदर्शनमा बदल्न सक्छौं ।
टिम सेलेक्सनमा कतिको गाह्रो हुन्छ ?
टिममा राम्रो प्रतिष्पर्धा छ । त्यो टिमका लागि राम्रो पक्ष हो । टिममा कसलाई खेलाउने कसलाई नखेलाउने भन्दा पनि सबै खेलाडी तयार छन् । जिम्मेवारीका लागि दाबी गर्नका लागि सबै तयार छन् । हामी भोलिको पिचको अवस्था अनुशार खेलाडी छनोट गर्नेछौं । हामी हाम्रो उत्कृष्ट पहिलो एघारलाई टिममा उतार्नेछौं । एक दिवशीय र टि–२० मा अवस्यपनि केही खेलाडी परिवर्तन हुनेछन् । हामीले १६ जना खेलाडी लिएर आएका छौं ।
उनीहरुलाई सोही अनुशार प्रयोग गर्ने हाम्रो रणनीति हो । एउटा टिमका रुपमा हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नेछौं । ५० ओभरमा इनिङ बनाउने समय मिलिरहेको हुन्छ , आफ्नो कन्डिसनमा खेल्दा युएईका बलरहरु हावी हुने गरेका छन् ।
यो अवस्थामा केही कठीन हुन्छ ?
एक दिवशीयमा केही समय मिल्छ, तर एक दिवशीयमा सोझै आफ्नो प्रदर्शन गर्नु पर्ने जरुरी छ । यो भन्दै गर्दा पनि सबै बलमा छक्का–चौका हान्ने पनि होइन । स्ट्राइक रोटेट गर्नु जरुरी छ । सबै कुरा योजना अनुशार हुन्छ । युएईलाई नै हेरौं न । ३०–३५ ओभरसम्म पनि न्यूनतम स्कोर थियो । तर अन्तिम १०–१२ ओभरमा उसले राम्रो रन बनाएको थियो । टि–२० मा नयाँ बललाई शुरुमा राम्रो खेल्यौं भने इनिङ बनाउन सक्छौं ।
यो कुरा खेलाडीको ब्यक्तिगत क्षमतामा भर पर्छ । सबैलाई एउटा जिम्मेवारी दिइएको छ । खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निभाउँछ भन्नेमात्र हो । सिरिजको पहिलो खेल हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । पहिला के भयो भनेर सोच्नु भन्दा पनि अब के गर्न सक्छु भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आत्मविश्वासी बनेका छौं । तर आत्मविश्वासलेमात्र पुग्दैन, दुबै टिमका लागि बराबर मौका छ । जसले राम्रो खेल्छ, उसले जित हात पार्छ ।